पछिल्लो सय वर्षमा नेपालको सामाजिक एवं राजनीतिक घटना–क्रममा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कसको छ?
तर, अमेरिकी वातावरणीय इतिहासकार टम रोबर्ट्सनको भनाई भने भिन्न छ – लामखुट्टे!
औंलोको महामारीले जसरी सन् १९५०–६० को दशक अघिको नेपालको इतिहासलाई प्रभावित गर्‍यो, औलो उन्मूलनले त्यसरी नै त्यसपछिको नेपालको बसाइँसराइँ, जनसांख्यिक संरचना, सामाजिक सम्बन्धहरू, आदिवासी थारुको स्वायत्तता र राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई समेत प्रभावित पार्‍यो।
औलो उन्मूलनपछि तराईका उर्वर फाँटहरू शासकहरूले आफ्ना भाइभारदारहरूलाई बिर्ता र बकस दिए । तराई हुँदै पूर्वी–पश्चिम राजमार्गको रेखाङ्कन भयो । पहाडबाट झरेकाहरूले राजमार्ग आसपास बस्ती बसाए । पहाडबाट मात्र नभई भारतका सीमावर्ती सहरहरूबाट पनि मानिसहरू बसाइँ सरी आए । मलेरियासँग जुध्दै तराईका खेतहरू आफ्नो खुन र पसिनाले सिञ्चित गरेका आदिवासीहरू किनाराकृत भए । माओवादी युद्धको विसर्जनसम्म आइपुग्दा मधेस एउटा राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदायो।
तराई–मधेस मात्र होइन, सिङ्गो नेपालकै आधुनिक इतिहासमा यति धेरै प्रभाव पार्ने ठूल्ठूला घटनाहरूको जड टम रोबर्ट्सनले भने झैं एनोफिलिस मिनिमस प्रजातिको लामखुट्टे नै रहेको देखिन्छ।
नेपालको औलोको महामारीका विषयमा थुप्रै अध्ययन–अनुसन्धान गरेका रोबर्ट्सन सन् १९९० मा पहिलोपटक विद्यार्थीका रुपमा काठमाडौं आएका थिए । पछिल्लो ३० वर्षमा १० वर्ष उनले नेपालमै बिताएका छन्।
पछिल्लोपटक तीन वर्षअघि फुलब्राइट कमिसन नेपालका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा आएका रोबर्ट्सन हाल काठमाडौंमै रहेर व्यक्तिगत अध्ययन–अनुसन्धानमा सक्रिय छन्।
नेपालको आधुनिक इतिहासलाई यति धेरै प्रभाव पार्ने एनोफिलिस मिनिमस लामखुट्टेको बारेमा जान्न–बुझ्न रोबर्ट्सनभन्दा अर्को भरपर्दो स्रोत–व्यक्ति भेटिँदैन । यसैले, म उनलाई भेटेरै औलोको इतिवृतान्त सुन्न चाहन्थे।
तर, कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोबर्ट्सनसँग प्रत्यक्ष भेट्ने इच्छा पूरा भएन । मैले उनलाई फोन गरेँ । फोनमै मेरो नमस्कार फर्काउँदै उनले प्रष्ट नेपालीमा सोधे – ‘नमस्ते, को बोल्नु भयो?’
तीन दशकदेखि नेपाल आउँदै–जाँदै गरेका र तराईका विभिन्न क्षेत्रका मानिससँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गरी अध्ययन–अनुसन्धान गरेका रोबर्ट्सनले प्रष्ट नेपाली बोल्नु कुनै आश्चर्यको विषय थिएन । तर, उनीसँग औलोका बारेमा भने धेरै आश्चर्यजनक तथ्य र एनेक्डटहरू रहेछन्।
रोबर्ट्सनका अनुसार, सन् १९२० तिर मात्र नेपालमा औलो भित्रिएको थियो । सुरूमा फाट्टफुट्ट मात्रै औलोका बिरामीहरू भेटिन्थे । सन् १९५० को दशकमा भने औलोले महामारीको रुप लियो।
औलो एक खालको हुँदैन, यसका विभिन्न प्रकार छन् । नेपालमा खासगरी दुई प्रकारका औलो देखिएको रोबर्ट्सन बताउँछन्।
‘भिभ्याक्स र फाल्सिपेरम औलो नेपालमा देखिएको थियो । यीमध्ये फाल्सिपेरम केही खतरनाक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फाल्सिपेरमले एनीमिया निम्त्याउँछ । यसको समयमै उपचार भएन भने मिर्गी, अन्धोपन, दिमागी समस्या हुनुका साथै मानिसको मृत्युसमेत हुन्छ।’
सन् १९५० मा तराईका घरका भित्तामा लामखुट्टे मार्ने स्प्रे छर्कदै । फोटो : अमेरिकाको राष्ट्रिय अभिलेखालय, कलेज पार्क, म्यारिल्याण्ड
‘एनोफिलिस फ्लुभियाटिलिस र एनोफिलिस मिनिमस नामक दुई प्रजातिका लामखुट्टेले नेपालमा औलो ल्याएका हुन् । यी प्रजातिका लामखुट्टेले तराईका सफा पानीको नजिकै प्रजनन गरेर औलो फैल्याएका थिए । यी लामखुट्टेहरु नेपालको तराईमा मात्र नभएर उपत्यका र बेँसीहरुसम्म पुगेका थिए,’ उनले नेपालमा औलो भित्र्याउने लामखुट्टेको कहानी सुनाए।
अहिले पनि अधिकांश मानिसले सोच्छन्, तराईका जुनसुकै ठाउँमा औलोको जोखिम उत्तिकै थियो । तर, नेपालीको यो सोचाई गलत भएको रोबर्ट्सन बताउँछन् । त्यसो हो भने कस्ता ठाउँमा चाहिँ औलोको जोखिम थियो त ? रोबर्ट्सन भन्छन्, ‘मानिसहरूले सोचेजस्तो तराईंका सबै ठाउँमा औलोको जोखिम थिएन । तराईका पनि केही ठाउँमा मात्र औलोको प्रभाव थियो, जस्तो कि जंगलको छेउमा भएका बस्तीहरू।’
त्यतिखेर खासगरी तराईंका पनि विराटनगर र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा औलोको प्रकोप बढी हुने धेरेलै आँकलन गरेका थिए, तर ती क्षेत्रमा सोचेभन्दा कम औलो फैलिएको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, ‘ती क्षेत्रमा फैलिएको औलो त्यति घातक थिएन, सामान्य औलो मात्र थियो ।’ नेपालको तराईमा मात्र नभई औलो हिमाली क्षेत्रका उपत्यकाहरू र बेँसीहरुमा देखिएको थिए।
झुल प्रयोग गर्ने, मस्कुइटोनेट, कुइनाइन प्रयोग गरेर औलोबाट बच्न सकिन्थ्यो । तर, यो अधिकांश नेपालीको पहुँचभन्दा बाहिर भएको रोबर्ट्सनको बुझाई छ । ‘धेरैलाई यसका बारेमा थाहै थिएन, थाहा भए पनि उनीहरुसँग झुल र मस्कुइटेनेट किन्न सक्ने अवस्था नै थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘जो मानिसहरु भारत जान सक्थे, उनीहरूले मात्र यो प्रयोग गरेका थिए।’
अमेरिका र विश्व स्वास्थ्य संगठनको औलो नियन्त्रणको प्रयासले पूर्व रुपमा लामखुट्टे नियन्त्रण हुन नसकेको उनी बताउँछन् । औलो नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिएको किटनाशक र अन्य औषधीले लामुखट्टेमा झन प्रतिरोधक क्षमताको विकास गरेको उनको बुझाई छ।
औलो नियन्त्रणका एकल प्रयासहरु असफल भएपछि नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकाले संयुक्त रुपमा औलो नियन्त्रणको अभियान चलाएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यो अभियान सन् १९५९मा सुरु भएको थियो । यो ५–६ वर्षसम्म चलेको थियो । यो संयुक्त प्रयास चाहिँ प्रभावकारी भयो । औलो पूर्ण रुपमा निर्मूल नभए पनि यो अभियान अन्य धेरै देशको भन्दा सफल भएको थियो।’
Published Date: Monday, 11th May 13:40:54 PM
रानी एश्वर्यले अध्ययन गरेको काठमाडौंको…